Chizvarwa chechipfumbamwe Chips inogona kuva nemamwe macores | Ndinobva mac
Intel inotarisirwa kuve neiyo Chizvarwa chechipiri kune rimwe zuva muchikamu chechipiri che2019. Izvo zvisingazivikanwe iwo maitiro avo. Zvirokwazvo ivo vanozove iwo maChips atinozoona mune nyowani iMac uye MacBook Pro 15 inches uyezve, mune inotarisirwa Mac Pro.
Nhasi kuburikidza newebhu AnandTech, isu tinoziva zvimwe zvimwe zvetsananguro yeaya 9th chizvarwa Intel machipisi. Pakati pezvinhu zvikuru zvitsva zvichave iyo kuwedzera muhuwandu hwema cores. Mazhinji eazvino 6-core machipisi, ichava 8 cores.
Asi ma processor aya haataure chinhu vari vega. Ngatione kuti kumisikidzwa kweramangwana Apple machipisi kungave chii. Kana iri 15-inch MacBook Pro, iyo kusvetuka muhuwandu hwema cores eCore i7s (iyo i7-8750H uye i7-8850H) ine 6 cores uye gumi nembiri tambo, dzinova 12th chizvarwa machipisi (i9-7H uye i9750-7H) mune 9850 cores uye 8 tambo .
Kana iri nyeredzi processor ye 2018 MacBook Pro, iyo ine gakava i9-8950HK iine 6 cores uye gumi nembiri tambo, inozoendawo kune modhi ine 12 cores uye 8 tambo. Izvo isu zvatisingazive mune ino modhi ndeye data paTDP uye yayo base frequency. Zvakajairika kuti Intel ichengetedze data reayo "nyeredzi" chip chakavanzika kuti iratidze mune yekuratidzira kwechigadzirwa uye kwete kuti ipe zviyeuchidzo kumakwikwi.
Pane kudaro, iyo 13-inch MacBook Pro ivo vaisazogamuchira shanduko muhuwandu hwema processor. Padivi reMac, isu takawanawo huwandu hwema processor. Muchiitiko cheiyo i5-7400 chip iyo yatinoona mune iMac 4K, iyo ine ina cores uye shinda ina, inogona kugadzira nzira i4-4 ine 5 cores uye 9400 tambo. Izvo zvakafanana zvinoita kunge zvinoitika mumuenzaniso 5k.
Iyi haizi nhau dzichangoburwa dzinoenderana neMac nhasi. Isu tinoziva zvakare kuti Apple ichapa zvinongedzo kune ramangwana Mac Pro kumusangano wekuvandudza unotevera Chikumi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » 9th Generation Chips mune Remangwana iMac uye MacBook Pro Zvingave NeMamwe Makore